नयाँ वर्ष २०२० को पहिलो दिन विश्वमा कति शिशुको जन्म होला ? – Nepal Japan
नयाँ वर्ष २०२० को पहिलो दिन विश्वमा कति शिशुको जन्म होला ?
नेपाल जापान १६ पुष १६:२३
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन विश्वमा कति र नेपालभर कति नयाँ शिशुको जन्म होला ? यो कुतुहलतापूर्ण प्रश्नको उत्तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ)ले दिएको छ । युनिसेफका अनुसार संसारभर नयाँ वर्षको दिनमा ३ लाख ९२ हजार ७८ शिशुको जन्म हुनेछ भने नेपालमा एक हजार ५६७ शिशु जन्मिने अनुमान गरिएको छ ।
विश्वभर जन्मने शिशुको तुलनामा नेपालको हिस्सा ०.४ प्रतिशत हुने युनिसेफले अनुमानित आँकडा प्रक्षेपण गरेको हो ।
नयाँ वर्ष र नयाँ दशकको शुरुआतमा आफ्नो भविष्यका लागि हाम्रा आशा र आकाङ्क्षाबारे सोच्ने मात्र नभई हामीपछि आउनेहरुको भविष्यका लागि पनि सोच्ने अवसर रहेको जनाउँदै युनिसेफका कार्यकारी निर्देशक हेनरिएटा फोरले भन्नुभयो, “पात्रोमा जनवरी फर्किदैं गर्दा हामीलाई जीवनको यात्रा शुरु गरेका हरेक बालबालिकाको उनीहरुलाई दिने अवसर र त्यसले दिने भविष्यको सम्भावनालाई सम्झाउँछ ।”